Blog banyere Mee, Ejiji, Stdị, Ejiji Italiantali · Musatalent
Na-egosi 1-10 nke nsonaazụ 18
Ihe site Loris Ochie
Bụ onye etemeete Artist ma nwee ike ịrụ ọrụ dị ka nke a nwere ike bụrụ otu n'ime ahụmịhe kachasị na mmezu maka ndị nwere mmụọ nka na mmetụta siri ike nke ọdịbendị ịmara mma na ịma mma. Ma gini bu ihe mbu na ...
Mkparịta ụka mmekọrịta na-atọ ụtọ maka mmekọrịta ọ bụla na-eri ahụ ma ọ bụghị naanị, Smashbox, onye ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ke Los Angeles na Smashbox Studios foto nka, malitere ụnyaahụ na profaịlụ instagram ya @smashboxitaly, ndụ raara onwe ya nye kpamkpam ...
| Lelee Vidio Dị N'elu | #iorestoacasa ma ọ bụrụ na enweghị etemeete! N'ime oge mkpọchi a, anyị nwere ohere ilekọta akpụkpọ ahụ anyị anya nke ọma yana gịnị kpatara ya, ịnwale ngwaahịa dị iche iche etemeete nke anyị na-ejitụbeghị, na-anwale ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ na vidiyo ...
IHE Ọzụzụ N'FORL EF AKA Gị
N'okwu a, m ga-achọ ilekwasị anya na iwebata usoro ọgwụgwọ ọhụrụ n'ihi na ekwenyere m na ọ dị mkpa ịghọta etu esi emezu atụmatụ ọhụụ na-enweghị igbu oge na ego, otu esi ahọrọ ụzọ kwesịrị ekwesị maka azụmaahịa anyị, na-elekwasị anya na mkpa nke. ..
Ọzụzụ N'OGE CORONAVIRUS
Na-agbanwe ụwa ụbọchị 15! Oké ọgba aghara bụ ohere dị ukwuu maka mgbanwe, ịpụ na mpaghara a na-akpọ "mpaghara nkasi obi", a manyere anyị ịgbanwe omume anyị, ọhụụ anyị na mgbe ụfọdụ ha bụ ohere iji dozie ọnọdụ ...
ANYANWU: uwe ejiji 2018
Ihe site akpo
ANYANWU: Ngwa nke ị na - enweghị ike ịme na-enweghị oge anwụ bụ ugogbe anya anwụ, maka oge ọkọchị 2018 a ga-enwerịrị bụ anya nwamba. Lee ndị kacha mma amụma n'ihi na n'oge okpomọkụ: Saint Laurent SL…
Ejiji ejiji 2018
Uwe ejiji: N'oge okpomọkụ a ị nwere ike ịhọrọ ụdị dị iche iche na-ahọrọ ndị dabara gị! Otu akwa mmiri ahụ wee laghachi na ejiji! Super-legged na nwa, enwere ike iji ya ọzọ dị ka agụ owuru iji maa mma mgbe niile. Calzedonia na-atụ aro: ...
MODA PAREO 2018: Ngwa dị mkpa n'ụsọ osimiri
30 Ka 2018
Uwe ejiji 2018 Sarong bụ ngwa ngwa osimiri nke ị na - enweghị ike ịme na - enweghị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ nwere ike dochie uwe site na kechie ma akụkụ nke elu na nke ala. Uwe pareo ga-abụ otu n'ime ihe ...
ROSSETTI MATT 2018 MUST-HAVES nke oge
26 Ka 2018
Lipsticks 2018: Agba na ndụmọdụ maka ihe ga-adịrị n'oge "Inwe egbugbere ọnụ mara mma ... kwuo okwu ọma" kwuru mma Audrey Hepburn, mana anyị maara na tupu ịge ntị n'egbugbere ọnụ ya nwere ikike ịrata na naanị anya . Abụ m…
Runswa na-agba ọsọ ọsọ!
23 Ka 2018
Ọganihu teknụzụ nke teknụzụ na Web (Social Media, Youtube, FAD) kpochapụrụ ụzọ ochie nke iche echiche na ịbịaru ndụ kwa ụbọchị site na "ịmanye" anyị ịgbanwe ka anyị wee ghara ịdaba n'ọnyà nke iche. Evolution gosipụtara onwe ya na ...